गठबन्धनको तस्वीर गण्डकीमा : समसामयीक टिप्पणी - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ असार १५, मंगलवार ०७:००
सत्ता स्वार्थ र पदीय लिप्ताको विरोध जनाएका ओलि इतिरका राजनैतिक पार्टि गडबन्धनको तस्वीर गण्डकीले छर्लङ्ग पारेको छ ।
भन्दा र गर्दा राजनीतिमा फरक नै पर्दछ । राजनीतिक संस्कार नफेरिएका नेताहरु चाहे जुनसुकै समयमा, जसनसुकै गठजोडबाट सत्ता आरोहणको चुलोमा उभिउन उनीहरुको सत्ता डकार गन्हाई हाल्छ ।
संघमा केपि ओलीले सत्तामा मनपरि गरे यही आरोपबाट कित्ताकाट गरेर आएको माओवादी केन्द्र, काँग्रेसको लगौंटि समातेर सत्ताको नयाँ भेरिएन्टमा आइपुग्दा वा ओलीले आफूलाई मानसम्मान र उचो नराखेको दर्द ओकल्दैआएका माधव नेपाल समुहको एमाले गुट चकचक अन्तमा सत्ता रोहणकै रादनमा सिमित छ ।
समाजवादी व्यवस्थाको घोतक जसपा २ सभासद सत्तारोहणमा मन्त्रीको चौको चढ्न नपाएपछि गण्डकीमा नयाँ भेरिएन्टको सत्ता स्वार्थी चेहरा पर्दाफास भएको जनताले देखेका छन् । गण्डकी संसद र गठबन्धनका अमृत बनेका मनाङेले अझै विभागीय मन्त्री नपाएपछि भौतिक मन्त्रालय आफूले दिनमा चलाउने र रातमा माओवादीले चलाउने सम्मका अभिव्यक्तिले यो सरकार र गण्डकी गठबन्धनको खास राज खोल्दछ ।
संघीयताको विरोध, प्रदेससभाको रोष्टमबाट प्रदेश खारेज हुनुपर्दछ भन्दै आएको राजमो यही गठजोडको भूमरीमा फस्दा आफ्नो एक साँसद खारेज गरेर बसेको छ । ३ साँसद रहेको राजमोमा २ साँसदले वजेटको राम्रै माग र खारेज भएका साँसद कृष्ण थापाले सम्हाल्दै आएको संघीय मामिमा सभापतिमा जोड गरेका छन् । दुईमा को भारी पर्ने वा कस्को जर्काले काम गर्ने चर्चाकै सवाल उनीहरुसमर्थकहरुले बताउँछन् ।
सरकारमा सामेल नभएपनि सत्ता गठबन्धनको रसस्वादन भने मज्जाले लिनपाइने अंकले साथ दिएको छ । गठबन्धन सरकारले मन्त्री मण्डल विस्तार गनै धौ व्यहोरिरहेको बेला ‘काँग्रेस चाम्रो’ भन्नेसम्मका बचन मुख्यमन्त्रीले खेप्नुपरेको छ । तत्काल विवाद निरुपण नगरे वजेट पास गर्नेमा संकट देखिने तगारो उत्तिकै छ । त्यसकार मुख्यमन्त्रीले पहिलो वजेट पारित त्यसपछि मन्त्रालय बाँडफँडका प्रस्ताव ल्याएका कुरा समेत बाहिर आएका छन् । तर भित्रभित्र कुहिसकेको कुभिण्डो जस्तो बनेको गण्डकी गठबन्धन र यसका गतिविधिले संघमा पाँच प्रधानमन्त्री भर्सेस एक ओलीभारी परिरहेको परिदृश्यमा साँच्चै गठबन्धनको सरकार बन्ने छाँट आयो भने कति दिन यो सरकार सञ्चालनमा आउला, अहिले मुल्याँकन गर्दा फरक पर्देन ।
सौतको रिसले ……को काखमा …. गर्ने नेपालको राजनैतिक संस्कार जनताको आकाँक्षा र पिजाइएको भ्रमभन्दा केही रहेनछ भन्ने गण्डकी गठबन्धनले पुष्टि गरिदिएको छ । गुरुङ सरकारहुँदा कोभिडमा केही गर्न सकेन भन्ने यही गठबन्धन हो आज गरेको के हो त्यो किन देखाउन सकेन ? अव प्रशन गर्न थाले हुँदैन र ? क्षमता माथि दुईचार दिन प्रश्न नगरौं तर सुरुवाती खुट्टी कताछन् त्यहाँ औंलो ठड्याउन त सकिने बेला भयो होला नी ?
आफैमा नयाँ सरकार निर्माणको क्रममा गण्डकीको तत्कालीन विपक्षी मोर्चाबाट आएको अभिव्यक्ति सम्झने हो भने, गठबन्धन निर्माण संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको लागि भन्ने थियो । बोलीजस्तै व्यवहार भएको भए यहाँ लाभको पद गौण र लोकतन्त्रको रक्षा प्रमुख विषय हुनुपर्दथ्यो । विश्वासको मत लिएको ११ दिन बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्रीले विनाविभागीय मन्त्रीलाई मन्त्रालय जिम्मा लगाउन नसकनु क्षमताको गणना होईन र ?
आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ को बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । जनताका मुलभूत आवश्यकताको संवोधन गर्नुपर्ने सरकार असारे झरीमा फिलित्त गलेको छ । गठबन्धनको राजनीतिमा निष्ठा र इमान्दारिता कोभिडको कहरमा खण्डहरु झै भान हुन्छ । कथाका रचयिता, प्रकाशक र पाठकबीचको तालमेल नखाभएपछि यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो भन्नेमा मूल्य हिसाव जनताले राख्दैनन र ? सचेत जनताले विहानै यसको औचित्य नजानेका होईनन् । दिउँसो भइसक्यो अझै ओछ्यानमा रहेको गठबन्धन के सम्साँझसम्म किचलो कुरेर जुनेलीमा रमाउने हो त ?